Akụkọ - SNOPE nwere nzukọ kwa afọ iji mee ememme afọ ọhụrụ na 29, JAN.
SNOPE nwere nzukọ kwa afọ iji mee ememme afọ ọhụrụ na 29, JAN.
Ọ na-abịa ezumike ezumike afọ ọhụụ, SNOPE nwere nzukọ kwa afọ iji mee ya na ndị ọrụ niile. Onye isi njikwa ahụ chịkọtara arụmọrụ nke afọ gara aga ma jaa ndị ọrụ ahụ pụtara ìhè mma. A na-enye onyinye dị iche iche dị ka "onyinye kacha mma onye ọrụ" "Onyinye onyinye puru iche" "onyinye ahịa kacha mma"… Onye isi njikwa kọwakwuru banyere ọrụ ọrụ na 2021. Mee ka ọzụzụ ndị ọrụ sie ike, mee ka mmepe mmepe ọhụụ dịwanye mkpa, ọkachasị maka ndị ahịa isi ọrụ iji nye nkwado atumatu.
Ihe ndozi obi ụtọ na-akpali akpali mere ka ndị otu niile nwee njedebe. Thekọ “echi ga-aka mma” na-ewetara gị mmalite dị ebube, na-ekwupụta ebumnuche dị mma nke ndị ọrụ nke SNOPE maka ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ. Oriakụ Feng Chen, onye isi ụlọ ọrụ ahụ, wasụbigara mmanya oke n'ihi ọnọdụ ọma ya n'ịgba egwu; Maazi Yu Zhou, onye isi njikwa, mere ka anyị cheta afọ ndị siri ike n’oge gara aga; abụ anwansi "obere apụl" nke ụmụ nwanyị ibe ya nke ụlọ ọrụ ahụ rụrụ bụ ihe ama karịa; egwuregwu ndị a na-emekọrịta ihe n'etiti ndị ọrụ dị ezigbo egwu n'oge mmemme ahụ; Ihe omume anọ na-atọ ụtọ na onyinye iri na itoolu mere ka ikuku nke nzukọ a na-eme kwa afọ ruo njedebe, na onyinye kachasị elu nke iPhone 12 mechara daba n'aka onye njikwa ahịa Yang Zheng Na nri afọ ọhụụ, ndị ọrụ niile buliri ugegbe ha iji mee emume afọ ọhụrụ ma nwee olile anya na ọdịnihu SNOPE ga-aka mma.
Nzukọ niile a na-enwe kwa afọ bịara na mmechi na-aga nke ọma na ọnọdụ kwekọrọ, nke na-ekpo ọkụ, nke na-enye ọ andụ na nke ọ andụ, na-egosi mmụọ ike, nke ziri ezi, United na mmụọ ọrụ nke ndị ọrụ. N’ileghachi anya azụ na 2020, anyị na-agbasi mbọ ike, na-agbasi mbọ ike, ma na-emekọ ihe ọnụ; na-atụ anya 2021, anyị nwere otu ebumnuche, nwee ntụkwasị obi, ma na-atụ anya na ọdịnihu nke SNOPE ga-akawanye mma.
Post oge: Feb-04-2021